How'd it happen and more reports?: မြန်မာပြည်ငွေကြေးဖောင်းပွရခြင်း !
၂၀၁၆ နှစ်ကုန် Q4/16 မှာ နိုင်ငံခြားငွေလ်ိုအပ်နေတဲ့ $ တွေ ဘယ်လောက်များလဲ? ကြည့်လိုက်ပါအုန်းဗျ...
မနှစ်ကထက် ၂ဆတောင် $ ၄၄၁မီလန်တောင်နော်...
လိုအပ်ချက် ဒေါ်လာတွေ Balance Of Trade- Q4/16~ - 441 US Million ( Exports -962/Imports -1419 US Million)
ဒါပ တရားဝင်လမ်းကြောင်းကနော်! တရားမ၀င်တဲ့ လမ်းကြောင်း တွေပါတွက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့.....
Dec 12,2106 , Singapore Penisulla Plaza Money Exchnge Rate ! ဒီနေ့ ထပ်တက်သွားပြန်ပြီ..
U$/MMK-1374/1377 , S$/MMK-963/968 ~ S$က အမိမြေကထက် ၂ ၊ ၃ကျပ်ပိုတတ်ပါတယ်...
ကမ္ဘာရွေှ့ဈေးကျနေတော့ GLD-1152.00 16:22 ချိန်ထိကျနေပြီဗျ... ကမ္ဘာရွှေအ၀ယ်ဆုံးအိန္ဒိယတော့ ငွေကြေးပြဿနာနှင့် ရွှေအ၀ယ်မရှိတော့တာနှင့်ဈေးက အကျဖက်ဘဲရှိမယ်ဗျ...
ထုတ်ကုန် သွင်းကုန် တ၀က်လောက်ကို ကွာနေတာနှင့် နှစ်ကုန် ကြွေးစာရင်းတွေလဲ စာရှင်းပေးရတော့မယ်...
ဒီငွေဈေးနှင့်တော့ မြတ်ဖို့တော့မရှိဘူး အရှူံးဘဲရှိမယ်ဗျ....
ဒါကြောင့်အမေပြောတာပေါ့...လုပ်ကွက်ပျောက်နေလို့ငွေ၊ေ၇ွှ၊ဒေါ်လာ ကစားနေတဲ့ ငွေပိုငွေလျှံနေတဲ့လူတစုတွေ ကိုယ်ကျိုးချည်း မကြည့်ကျ ပါနှင့်လို့ပြောပြောနေရတာပေါ့လို့!
အခုလို တိုက်ပွဲ လနှင့်ချီဆက်ဖြစ်နေရင် ဒေါ်လာဈေးထပ် တက်ဖို့ဘဲ ရှိမယ်ဗျ...
တရုတ်ပို့ကုန် ဘယ်နိုင်မှ မယူကျဘူးလေ...
ဒီတော့ ပြည်တွင်းတရုတ်ပို့ကုန်သမားတွေ လာလုပ်ရမလဲ?
Myanmar Current Account to GDP Forecasts are projected using an autoregressive integrated moving average (ARIMA) model calibrated using our analysts expectations. We model the past behaviour of Myanmar Current Account to GDP using vast amounts of historical data and we adjust the coefficients of the econometric model by taking into account our analysts assessments and future expectations. The forecast for - Myanmar Current Account to GDP - was last predicted on Monday, December 12, 2016.
Posted by Ko Nge at Monday, December 12, 2016